Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii saakay ka dhacay magaalada Muqdisho (DAAWO SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii saakay ka dhacay magaalada Muqdisho (DAAWO SAWIRO)
Waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa laba qarax oo aad u xoogan oo saakay gelinkii hore lagu weeraray meel u dhaw xarunta taliska AMISOM ee Xalane iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Qaraxyadaasi oo ahaa laba qarax ayaa waxaa loo adeegsaday laba gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, waxaana mid ka mid ah labadaasi gaari uu ku qarxay meel ku dhaw afaafka hore ee dhismo ay degan yihiin xubno ka tirsan UN-ka, iyadoona qaraxa kale uu ku qarxay meel Check-Point ah oo ay ilaalo ka ahaayeen ciidamada nabad-sugidda qaranka Soomaaliya.
Jugta qaraxyadaasi ayaa aad looga maqlay qeybo badan oo ka mid ah degmooyinka Muqdisho, waxaana sida la sheegay qaraxyadaasi ku geeriyootay ciidamo ka tirsan AMISOM iyo sidoo kale xubno ka tirsan Qaramada Midoobay (UN-ka)
Ilaa 13 qof oo isugu jiray ciidamo iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday qaraxaas ka dhacay albaabka hore ee xarunta ciidamada AMISOM ay ka galaan garoonka Aadan Cadde ee loo yaqaano Madiina Gate, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay in ka badan 10 qof kale.
Gawaarida Ambalaasta deg dega ah ayaa goobta uu qaraxa ka dhacay soo gaaray, waxaana ay halkaasi ka qaadeen dhaawacyadii halkaasi yaalay, iyadoona dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay qaraxaasi ku geeriyootay.
Ciidamada nabad-sugidda qaranka ayaa maalintii sabtida ahayd fashiliyay gaari laga soo buuxiyay qaraxyo, waxaana maalmihii ugu dambeeysay ay ciidanka ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ku mashquulsanaayeen fashilinta qaraxyo la sheegay inay Al-shabaab ka geysan rabeen magaalada Muqdisho.
Wixii kusoo kordha warkaan dib kala soco wararkeena dambe Insha Allaah